युरोकप २०२० : विजेताले कति पाउँछन् नगद पुरस्कार ? - Arthasansar
युरोकप २०२० : विजेताले कति पाउँछन् नगद पुरस्कार ?
शुक्रबार, १८ असार २०७८, १५ : २६ मा प्रकाशित
युरोकप च्याम्पियनसिप २०२० फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टरफाइनल खेल आज शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । १६औँ संस्करणको युरोकप अन्तिम चरणमा पुगेकाे छ ।
आज दुई खेल हुनेछन् । नेपाली समय अनुसार आज राति ९:४५ बजे हुने पहिलो खेलमा स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध स्पेनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । खेल रुसको सेन्ट पिटर्सवर्ग रंगशालामा हुनेछ । त्यस्तै, नेपाली समय अनुसार राति १२:४५ बजे बेल्जियमले इटालीविरुद्ध खेल्नेछ । खेल जर्मनीको म्युनिख रंगशालामा हुनेछ ।
युराेकपका बिजेताले कति पुरस्कार हात पार्छन् भन्ने सबैकाे चासाेकाे विषय बनेकाे छ । आज हामी युराेकपका बिजेताले प्राप्त गर्ने पुरस्कारहरूमध्ये नगद पुरस्कारकाे कुरा गर्नेछाैँ ।
युरोकपको पुरस्कार राशी ३ करोड ७० लाख युरो बराबर रहेको छ । यो ५ अर्ब २२ कराेड नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ ।
युराेकप २०२० का विजेताले १ अर्ब ४१ करोड नेपाली रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । उपविजेताले ९८ कराेड नेपाली रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सेमिफाइनलमा पुगेको टोलीले ७० करोड नेपाली रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । क्वाटरफाइनलमा पुगेको टोलीले ४५ करोड ८५ लाख नेपाली रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । अन्तिम १६ मा पुगेको टोलीले २८ करोड २२ लाख नेपाली रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । समूह चरणकाे प्रत्येक जीतमा २१ करोड १६ नेपाली रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।समूह चरणमा बराबरी हुनेले १० करोड ५८ लाख नेपाली रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
विश्वकप क्रिकेट लिग–२ : स्पेनमा हुने भनिएको खेल स्थगित
खल्तीबाट यूरो कपको सही अनुमान भोटिङ्ग गरी उपहार जित्न सकिने
रोनाल्डोको कारण कोकाकोलालाई ४ अर्ब डलरको घाटा
नेपालले इराकसित मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै